Ayikwazi ukushintsha Radio (NAV1) on Air France Airbus 380
Umbuzo Ayikwazi ukushintsha Radio (NAV1) on Air France Airbus 380
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #442 by spilok
Ngizamile konke, kodwa angikwazi ukushintsha umsakazo (NAV1) imvamisa on Air France Airbus 380. Ngithanda indiza kodwa kungcono engenamsebenzi kimi uma angikwazi ukushintsha umsakazo amaza.
Yini imfihlo? Ngicela.
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #443 by Dariussssss
Same here ... Eqinisweni, bonke A380s PA babe inkinga.
Mhlawumbe, uma kukhona indlela athathe isikhundla saleyo umsakazo kumbe noma yini, ne omunye Boeing ezazizosiza, kodwa ungacabangi ukuthi lokho kungenzeka. Ngiyakhumbula, ngo FS2004 abebengakwenza.
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #444 by Dariussssss
Ngakwazi ukukulungisa. Konke okudingayo ezizenzakalelayo yakho A321.
Iya ku A321,
Panel ifolda evulekile,
bheka futhi uvule ifayela panel.cfg,
ukopishe lezi imigqa:
(Nje yibo anemibala), musa ukukopisha Window01, kungaba isikulufa up A380 yakho panel.
Iya ku A380 yakho,
Panel.cfg ifayela ovulekile,
bheka futhi uthathe isikhundla sayo yonke le imigqa Radio.
Ihlolwe imizuzu embalwa go, futhi wenza kokwehla enhle.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: spilok, Gh0stRider203, geniousabhishe1
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #445 by Gh0stRider203
Akumelwe Ngitholile memo athuma ....
Imisakazo on Airbus kukhona isici ozikhethela. Kinda like blinkers on a BMW
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #446 by Dariussssss